Ugwetshwe iminyaka engu-6 owengozi eyabulala uNgqongqoshe | News24
Ugwetshwe iminyaka engu-6 owengozi eyabulala uNgqongqoshe
Johannesburg – Umshayeli weloli elabandakanyeka engozini okwashona kuyona uNgqongqoshe wezemisebenzi kahulumeni nokuphathwa kwayo, uCollins Chabane, kanye nonogada bakhe ababili ugwetshwe iminyaka eyisithupha ebhadla ejele yiNkantolo yeMantshi yaseMankweng, eLimpopo, ngoLwesihlanu.
U-Amukelani Rikhotso, 31, walivuma icala lokubulala ngokungenhloso, elokushayela ephuzile nelokungayithobeli imithetho yomgwaqo ngesikhathi evele enkantolo ngo-Ephreli, kusho umqondisi wezokushushiswa komphakathi uMashudu Malabi-Dzhangi.
Funda nalolu daba: Kushone usomatekisi oshayasibhamu bevulela ngenhlamvu
URikhotso ugwetshwe iminyaka eyisithupha ngamacala amathathu okubulala ngokungenhloso, iminyaka emithathu ngokushayela ephuzile, neminyaka emibili ngokungathobeli imithetho yomgwaqo.
Izincwadi zakhe zokushayela ngeke avunyelwe ukuzisebenzisa isikhathi eziyizinyanga eziyisithupha futhi akavumelekile nokuba nesibhamu.
UChabane, uLesiba Sekele, 38, noLawrence Lentsoane, 37, bashona engozini yomgwaqo ngesikhathi imoto yabo ishayisana neloli likaRikhotso ngesikhathi ezama ukujika emgwaqeni u-N1 phakathi kwasePolokwane naseMokopane ngoMashi 15, 2015.